Ma qab-qarannimo mise qabtii colaadaha? | KEYDMEDIA ENGLISH
Ma qab-qarannimo mise qabtii colaadaha?
Sida muuqata qabka uu sheegay inuu soo celiyay “Waa qabtii colaadaha iyo dagaallada”, maadaama uu si cad u kala qeybiyay ciidankii qaranka, isla-markaana kuwo ku heyb ah ka soo daldalayo Gedo iyo Caabudwaaq si ay ugu dagallamaan.
MUQDISHO, Soomaaliya – Madaxweynihii hore Farmaajo, ayaa xalay xilli danbe baahiyay muuqaal sagaal daqiiqo ah, kaas oo u jeedkiisu ahaa taageeridda war-mutiyeedkii ka soo baxay Shirkii Golaha Wadatashiga Qaran ee uu garwadeynka ka ahaa Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble, kadib cadaasis uga yimid wakiillada Beesha Caalamka.
Farmaajo kaliya kuma ekaan u jeedadii rasmiga ahayd ee hadalka lagu soo qasbay, hayeeshee, wuxuu ku raftay qodobbo uu ka been abuuray iyo manna-sheegasho aan waxba ka jirin, si uu u qaldo waaqica bulshada uu dhibaateynayay ku dhawaad shanti sano ee la soo dhaafay.
Wuxuu hadalkiisa u ekeysiiyay khudbad ku aaddan xaaladda guud ee dalka iyo doorashooyinka, yeelkeede, xaalad waddan, xeel-doorasho iyo xal-umadeed midna ma sheegin, marin-habaabin iyo majaro-qalloocin ayuu cod-baahiyaha u hor istaagay.
Wuxuu afkiisa ka ilaaliyay magaca RW Rooble, wuxuuna iska dhigay shaqsi amar siinaya Madaxda Dowlad-goboleedyada dalka, kuwaasoo uu ku adkeeyey hirgelinta jadwalka doorasho ee ay isla qaateen.
Sidii caadada u ahayd, wuxuu sii waday, ka been sheegidda dib-u-dhiska Ciidamada Qalabka Sida, wuxuuna saraakiishii iyo askartii af-ganbigii 27 December hoggaaminayay uga mahad celiyay isku daygoodii, halka guud ahaan kuwa daacadda u ah uu ku bogaadiyey sida naf-hurnimada leh ee ay u difaacayaan.
Wuxuu si cad uga been sheegay hannaanka siyaasadda Arrimaha Dibadda, taas oo ceyn wareegtay billowgii 2017, markii uu xaafiiska galay, isla-markaana uu darka diblumaasiyadda ka fogeeyay dalal muddo dheer Soomaaliya garab u ahaa.
Wuxuu xusay inuu soo celiyay qabkii-qarannimo, hayeeshee, wuxuu is moogsiiyay in isaga oo Madaxweyne sheeganaya lagu qasbay inuu ka baxo aamusnaanta, taageero buuxdana u muujiyo war-mutiyeedkii ka soo baxay Shirkii Golaha Wadatashiga Qaran.
Heshiiska uu RW Rooble, garwadeynka ka ahaa ee lagu qasbay inuu taageero, qodobkiisa 17-aad, wuxuu dhigayaa in AMISOM, dheeraad ah la dhigo inta u dhaxeysa xaafiiskiisa iyo kan Ra’iisul Wasaaraha, si looga fogaado in labada ilaalo isku fara-saaraan Madaxtooyada gudaheeda.
Wuxuu ku baaqay midnimo iyo ka fogaanshaha is-qabqasi siyaasadeed, halka uu afkiisa ka ilaalinayo Ra’iisul Wasaraha Xil-gaarsiinta ee sharcigu siinayo inuu yahay hoggaanka hirgalinaya hannaanka doorashooyinka dadban. siduu hadalkiisu isku qabanayaa?.
La dirirka musuqmaasuq iyo daahfurnaan dhaqaale, ayuu xusay, hayeeshee, waxaa nidaamkiisa ku maqan in ka badan 1,7 Bilyan, oo aysan xisaab-xir ka sameyn, isweydiintu waa side wax is daba-marin lagu ogaadaa xisaab la’aan.
Sanad kasta warbixinta hanti-dhowrka guud waxa ay muujisaa, lunsashada hanti dowlo iyo bobka xoolo dad-weyn.
Farmaajo, wuxuu xalay inkiray Guddiga doorashooyinka, isagoo masuuliyadda doorashada dusha u saaray madaxda maamullada, taas oo sharciga doorashooyinka baal-marsan.
Si guud waxaa ka muuqday niyad-jab xooggan, daal iyo wal-wal siyaasadeed, waxaana qudbaddiisa bilaaw ilaa dhamaad laga dheehan karay, isku dhex-yaac iyo kala shandheyn la’aan.